Warshadda Warbaahinta ee birqaya | Shiinaha Soo Saarayaasha Soo-Saarayaasha Warbaahinta iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Nidaamka Baaritaanka Polyurethane
Warbaahinta baaritaanka waa qayb muhiim ah oo muhiim u ah qalabka baaritaanka. Marka shaashadda gariirku ay gariireyso, iyadoo loo marayo qaabab kala duwan iyo cabirrada joomatariyeed iyo hoos timaadda ficillada xoogagga dibedda, alaabta ceyriinka ah waa la kala soocayaa oo la gaarayaa ujeeddada qiimeynta. Dhammaan noocyada guryaha ee maaddada, qaabdhismeedka kala duwan iyo maaddada baaritaanka ama xiisadda iyo xuduudaha kala duwan ee mashiinka baaritaanka waxay leeyihiin saameyn gaar ah oo ku saabsan awoodda shaashadda, waxtarka, heerka socodka iyo nolosha. Diif ...
Sharaxaadda sheyga Polyurethane mesh screen mesh wuxuu ka sameysan yahay xaashida polyurethane oo leh shaashad tayo sare leh. Polyurethane mesh screen mesh waa iska caabin abrasion iyo nolol adeeg aad u dheer ka badan mesh shaashadda birqaya mesh. Waxaa intaa dheer, hantida indho-la'aanta waxay ka dhigeysaa mid macquul ah in lagu baaro qalabka loo arko inuu yahay mid adag ama aan macquul aheyn in horey loo baaro. Polyurethane mesh screen mesh wuxuu leeyahay furitaanno aad u wanaagsan oo u dhigma sida 0.075mm, kaas oo ku habboon ballaaran ...
Nidaamka Baarista Rubber